Gargaar xanaanada xoolaha ah oo la gaarsiiyay Gobolada Waqoyiga Somalia – SBC
Gargaar xanaanada xoolaha ah oo la gaarsiiyay Gobolada Waqoyiga Somalia
Guddiga Caalamiga ee Laanqeyrta Cas, iyadoo la shaqeyneysa masuuliyiinta xanaanada xoolaha ee Soomaaliyeed, ayaa hadda ku soo gababeysay olole balaaran ee caafimaadka xoolaha ah waqooyiga dalka Somaaliya. Ku dhowaad 700,000 neef oo geel, ido iyo ari ah ayaa la baaray haddii loo baahdayna laga daweeyey dulin ama dhibaatooyin kale oo caafimmadka ah goboladda Togdheer, Nugaal, Sool iyo Sanaag. Ololaha waxaa ka faa’iideystay 43,000 qof oo dhaqaale ahaan ku tiirsan xoolahooda.
Xoolodhaqato badan ayaa hab-nololeedkooda qatar ku jira maxaa yeeley ma heystaan adeeg laysku halayn karo ee xagga xanaanada xoolaha iyadoo u dheertahay xaaladaha amni ee dagaalada la xiriira iyo waliba masiibiiyooyinka dabiiciga taasoo ku qasbaysa inay guurguuraan.
“Xoolaha waxay si gaar ah muhiim ugu yihiin bulshooyinka degan goobahan, kuwaasoo si aad ah ugu tiirsan daqligooda iyo sugnaanta cuntadooda,” sidaas waxaa yiri Patrick Vial oo ah madaxa Ergada ICRC ee Soomaaliya. “Xooladhaqatada barakacay waxaa si xun u saameeyey helitaan xadidan ee jidadka reer guuraaga ee caadada ah, goobaha daaqa , biyaha iyo adeegga xoolaha.”
ICRC-da iyo Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed oo si wada jir ah u bixiyay dawada ay isticmaalaan masuuliyiinta xanaanada xoolaha ee lagu daweynayo xoolaha ayaa waxay awoodaan inay gaaraan dadka ku nool qeybaha waqooyiga taasina waxaa suura galiyey hanaankooda shaqo ee dhexdhexaadka ah ee aan eexashada lahayn waxaana ka mid ah wadahal ay la galayaan qof waliba oo ay quseyso.
Maxamed Sheekh Cali oo ah isku duwaha mashaariicda sugnaanta dhaqaale ICRC-da ee dalka wuxuu sharaxayaa: Ololahan waxaa ka faa’iideystay xooladhaqatada barakacay iyo bulshooyinka ay martida u yihiin. Xooladhaqatada waxay ka caawineysaa inay dhowrtaan aqabkooda hab nololeedkooda uu ku tiirsan yahay iyadoo la yareynayo ku dhicista cudurrada ee xoolaha isla markaana la kordhinayo qiimaha suuqa ee xoolaha taasoo markeedina hagaajinaysa sugnaantooda dhaqaale.”
ICRC-da waxay ka shaqeyneysay Soomaaliya ilaa iyo 1977-dii iyadoo si dhow ula shaqeynaysa Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed. Waxay bixisaa taageero deg deg ah iyo mid fogba iyadoo ujeedaduna tahay in la xoojiyo isku filnaashaha bulshada. Intaas waxaa dheer, waxay horumarisaa ku dhaqanka Xeerka Caalamiga ah ee Aadanimada isla markaana kormeertaa qaabka loola dhaqmo lahaystayaasha iyo xaalada gobaha lagu haysto.
Faahfaahin dheeraad ah, fadlan la xiriir:
Ama booqo boggeena: www.icrc.org
Si aad u daawatid aadna u soo degsatid muuqaalada filimada ICRC ee ugu dambeeyey tayo warbaahineedna leh, booqo
Si aad u ogaatid waxa ICRC-da ka qabaneyso sidii loo joojin lahaa weerarada lagu qaado shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanka, booqo
Ka raac ICRC-da facebook.com/icrc iyo twitter.com/